Fifidianana… antoka amin’ny antoko | NewsMada
Fifidianana… antoka amin’ny antoko
Vita iny ny fametrahana ny antontan-taratasy firotsahan-kofidina ho loholon’i Madagasikara. Na ahoana na ahoana, mitohy hatrany ny raharaham-pirenena; eny, na misy aza ny hoe tsy mety handray anjara amin’izany fifidianana izany. Aiza ho aiza avy ireo antoko politika amin’izany? Na ireo eo amin’ny fitondrana sy ny mpanohana azy; na ireo ety ivelany hoe mpanohitra, misy manana olom-boafidy ary ao ny tsy manana izany fa tsy mandrotsaka olon-kofidina amin’ny fifidianana rehetra.
Tsaraina amin’ny asany ireo eo amin’ny fitondrana isan’ambaratonga sy isan-tsehatra: vita ny fanamby sy izay fampanantenana? Ao anatin’ izany ny hoe fitondrana tsara tantana, tany sy fanjakana tan-dalàna, fangaraharan’ny fitantanana, ady amin’ny kolikoly… Misy ny fiovana? Na efa mba misitraka fihatsaram-piainana ahay ny vahoaka ifotony; eny, na amin’ny fanaovan-draharaha eny anivon’ny sampandraharaham-panjakana sy ny vondrombahoaka itsinjaram-pahefana ihany aza, ohatra.
Ary ny hoe mpanohitra? Vitan’ny famoahana fanambarana ve, ohatra, ny raharaha? Fitsikerana, fanatsatsoana… Tonga amin’ny fanaratsiana aza ny sasany, na fankahalana, fanakorontanana… Tsy hita mazava intsony izay tena henoina sy inoana azy hoe tia tanindrazana amin’ny fanakianana hanatsaran-javatra, ohatra, na soso-kevitra mahasoa sy azo tanterahina fa tsy mamitaka… Aiza koa izay hahazoana antoka amin’ny antoko politika tsy mandray anjara amin’ny fifidianana?
Ny fandraisana anjara amin’ny fifidianana anefa no anisan’ny hitsarana ny herin’ny antoko politika fa tsy ny fialana amin’izany. Mila miomana sy mitaraina izany mandrakariva izy, raha tiana henoina sy inona. To teny izany: inoana izay lazaina, tanterahiny. Mba hifidianana azy amin’ny fifidianana manaraka amin’ny fandaharanasany tsara no ho ny an’ny mpitondra amin’izao. Aiza na inona? Ny fifidianana aza tsy andraisana anjara fa ilana. Aiza na inona no itsarana sy ametrahana azy amin’izany?